တုံ့ပြန်မှု-ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide လညျးမီးဖိုပန်းကန် - တရုတ် ZhongPeng အထူးကြွေထည်
SMP Desulphurizing nozzle
burner nozzle နဲ့ Flame nozzle
အထူး SiSiC (RBSiC) အစိတ်အပိုင်းများ
RBSiC SiSiC ဟင်းပွဲများ
anti-Wear အတွင်းပိုင်း Line
Sandspit နှင့်ကှနျ့ Bush
silicon carbide နှောင့်အယှက် nozzle
high-စွမ်းရည်ပါးလွှာ-နံရံနဲ့မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုမိုက်,f...
တုံ့ပြန်မှု-ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide လညျးမီးဖိုပန်းကန်
burner nozzle နဲ့မီးလျှံ separator
လူပျိုနှင့် Dual-မှုန်ရေမွှား nozzle
တုံ့ပြန်မှု-ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide နံရံ, နည်းပညာဆိုင်ရာ ce ...
RBSC အပြည့်အဝ Cone Sprial nozzle
1.5 လက်မရေမှုံရေမွှား desulfurization nozzle
ဒါဟာမြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့ခိုငျမာမြင့်သော wear ခုခံ, ကောင်းသောဓာတ်တိုးခုခံ, အပူစျေးမှာခုခံနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများ၏တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ RBSIC ဟာကွေးအစှမျးသတ်တိ SNBSC ထက် 50% မွငျ့မား, နှစ်ကြိမ် RESIC ထက်ထက်ပို (RESIC နှင့် SNBSC နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်) သာ. မြတ်သောရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ကြွေ applications များ: အဆိုပါအမျိုးမျိုးသောစက်မှုမီးဖို, အ desulphurization ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြီးမားသော boiers နှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများ, နှင့်ကြွေထည်, စက် ...
ဆိပ်ကမ်း: Weifang အား
ဒါဟာမြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့ခိုငျမာမြင့်သော wear ခုခံ, ကောင်းသောဓာတ်တိုးခုခံ, အပူစျေးမှာခုခံနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများ၏တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ RBSIC ဟာကွေးအစှမျးသတ်တိ SNBSC ထက် 50% မွငျ့မား, နှစ်ကြိမ် RESIC ထက်ထက်ပို (RESIC နှင့် SNBSC နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်) သာ. မြတ်သောရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။
တုံ့ပြန်မှုကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ကြွေ applications များ:
အမျိုးမျိုးသောစက်မှုမီးဖို, အ desulphurization ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြီးမားသော boiers နှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများ, နှင့်ကြွေထည်, ထိုစက်ပစ္စည်းများ, အသတ္တုဗေဒ, အီလက်ထရွန်းနစ်, ဓာတု, အ petroteum သည်သံနှင့်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း, စစ်တပ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ထိုလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့်အခြား လယ်ကွင်း။
သိပ်သည်းဆ g / cm3 3,02
သိသာ porosity % <0.1
ကွေးအစွမ်းသတ္တိ MPA 250 (20 ℃)
elasticity ၏ကိန်းပကတိတန်ဖိုး GPA 330 (20 ℃)
အပူအကငျြ့ W / MK 45 (1200 ℃)
အပူရှင်းလင်းချက် ဋ-1 × 10-6 4.5
Vickers-ခိုင်မာသော GPA 20
အက်ဆစ်-သက်သေပြချက် Alikaline အလွန်ကောင်းမွန်သော
ယခင်: တုံ့ပြန်မှုကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ပန်းကန်
နောက်တစ်ခု: တုံ့ပြန်မှု-ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ပန်းကန်
တုံ့ပြန်မှု Bond silicon carbide ပြား
တုံ့ပြန်မှု Bond silicon carbide Pusher ပြား
တုံ့ပြန်မှု-Bond silicon carbide လညျးမီးဖိုပြား
silicon carbide လညျးမီးဖိုပရိဘောဂ
silicon carbide ပြား
အထူး Shape ကြွေဟင်းပွဲများ
silicon carbide ကြွေ Beam
Flame ဟာ nozzle
တုံ့ပြန်မှု-ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ပန်းကန်